शनिबारको दिनमा संकटा देवीको दर्शन गरी : आजको राशिफल पढ्नुहोस् ! – Life Nepali
शनिबारको दिनमा संकटा देवीको दर्शन गरी : आजको राशिफल पढ्नुहोस् !
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति पत्नी विच विश्वासको वातावरण बढेर जानेछ । नयाँ कामहरु गरेर आम्दानीका स्रोतहरु बढाउँन सकिनेछ । दाजुभाई वा अग्रजहरुको सुझाब तथा सल्लाह मानेर अगाडी बढ्दा सफलता पाउँन सकिनेछ । बिद्यामा राम्रो प्रगति हुनाले पढाइ लेखाइमा मन जानेछ । बिभिन्न अवसरहरुले पछ्याउँने हुदा राम्रा परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ । सरकारी सम्पती तथा पैत्रिक सम्पती हात लागी हुने प्रसस्त सम्भावना रहेको छ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर आउँनेछ भने बिशिष्ट व्याक्तिहरु नजिकिने छन् । कन्फिडेन्ट पावर बढ्ने हुदा उपलव्धी मुलक कामहरु बन्नेछन् । राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरुले पद पाउँने समय रहेकोछ । सुन्दर तथा विलासी सामानको प्रयोग मार्फत अरुको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । खेतीकिसानी व्यावासयबाट आम्दानी गर्न सकिनेछ । -तपाईको दिन शुभ रहोस् .
Previous श्री केदारनाथ बाबाको मन्दिरको दर्शन गरी : आज सोमबारको राशिफल पढ्नुहोस्
Next मनकामना माताको दर्शन गरी : असार २८ गते आईतबारको राशिफल पढ्नुहोस् !